Ngaba kusemthethweni okanye akukho semthethweni ukuvula iselfowuni? | I-Androidsis
UFrancisco Ruiz | | Izaziso, Abasebenza ngefowuni
Inkqubo yokwenza vula ifowuni ukusebenzisa nenye inkampani exhaphake kwilizwe lethu kwaba semthethweni ukusukela ngala mhla NgoJanuwari 26, 2013 Ngaphandle kwemeko ethile, okona kubalulekileyo kukuba opharetha wokuqala osinike okanye osinike isiphelo sendlela kufuneka avume ukukhutshwa kwesiphelo.
Umthetho ophakanyiswe ngu DMCA, (Umthetho weLungelo lokushicilela kwiDijithali), yaqala ukusebenza NgoJanuwari 26 walo nyaka 2013 Kwaye yile nto iinkampani zibambelele kwizinyo kunye nezipikili ukugcina abathengi bazo ngesizathu sokungasikhululi isigxina ukuze sikwazi ukusebenzisa nezinye iinkampani.
Oku kusenza sibone ukuba le mithetho iza kugubungela kwaye ikhusele iimfuno zeenkampani ezinkulu zeemfonomfono, kuba eli nyathelo litsha lichaphazela imithetho yangaphambili eyayisebenza elizweni lethu apho ezi nkampani zikhankanywe ngentla zanyanzeliswa ukuba ziphele unyaka zifunyenwe. itheminali yomnxeba nasemva kokucela kweqela elinomdla, ukuba ukuqhuba ngaphandle kweendleko el ikhowudi yokuvula yesixhobo ukuba sikwazi ukusetyenziswa kwenye inethiwekhi eyahlukileyo kuleyo yomqhubi wokuqala.
Ukusuka apha sicela impilo kwiinkampani ezikwicandelo leefoni eziphathwayo kwaye sithathe umzekelo AT & T, eya kuthi ibonelele ngekhowudi yokuvula iitheminali zabo kubo bonke abathengi abayicelayo kwaye abahlangabezana neemfuno zengqondo esulungekileyo.
Iimfuno AT & T ukuba ikunike ikhowudi yokuvula
Akukho ntlawulo ilindileyo kunye nenkampani
Emva kokuthobela iinkonzo ezinesivumelwano, oko kukuthi, ukuba umgca wawunikwe ikhontrakthi yeenyanga ezingama-24, kuya kufuneka ukuba uzalisekisiwe.
Iakhawunti kufuneka isebenze ngexesha lokucela ikhowudi yokuvula yesiphelo.
Masibe nethemba lokuba iinkampani zemfonomfono zaseSpain azibambeleli kulo mthetho ukuzama ukugcina abathengi bazo ngazo zonke iindleko, kwaye bathathele ingqalelo amanyathelo athathwe AT & T kwaye babaguqulele kwimigaqo-nkqubo yeenkampani zabo ukuvumela iifayile ze- vula iselfowuni ukuze ukwazi ukusebenzisa nezinye iinkampani ukuba yile nto umsebenzisi ayifunayo.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Indlela yokuvula i-Samsung Galaxy S kunye ne-Samsung Galaxy SII nge-Galaxy S Unlock
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Abasebenza ngefowuni » Ukuvula iselfowuni ukuze uyisebenzise nenye inkampani, esemthethweni okanye engekho mthethweni?
Kubi kakhulu ngomthetho, apha eChile ngomthetho wokuphatheka, kuyakhawuleza kwaye kulula ukuvula iselfowuni kuyo nayiphi na inkampani, kuba yonke into yenziwa kwi-Intanethi.
URicardo Pino sitsho
Kwilizwe lam, eChile, isithuba esingangonyaka umthetho unyanzela iinkampani ukuba zithengise iiselfowuni ezivulekileyo ukuba zisetyenziswe yiyo nayiphi na inkampani. Injongo kukugcinwa komgangatho wenkonzo hayi ikhontrakthi yesixhobo. Ungamtshintsha umsebenzisi wakho rhoqo kwiinyanga ezi-6 ukuba unqwenela njalo.
Phendula uRicardo Pino
Umthetho omkhulu kwamanye amazwe amakhulu ukulandela.
Kuya kufuneka ucacise ukuba lo mthetho UCHAPHAZELA I-UNITED STATES.
Banokususa ukungathandabuzeki kwam, ndayihlaziya ikhontrakthi kunye ne-att ndathenga i-iPhone 5 eyangaphambili yayiyi-iPhone 4 ekufuneka ndikuxelele yona ukuze bandinike ukuvula (att)
Uzalisekisile ukuzibophelela ngokusisigxina kwaye ufike ngoku ngentlawulo kunye nomgca osebenzayo.
Nge-11/03/2013 ngo-04: 16, «Disqus» wabhala:
EMexico, kufuneka uyenze njani le nto (ukubonelela ngeekhowudi okanye ukukhulula ifowuni) ... Endaweni yokwenza oko, bonakalisa indawo yokukhutshwa ngekhowudi kwaye banyanzele ukuba usebenzise ibhokisi emnyama okanye uye kumntu okhupha ngokulula malunga nama-600 Iipesos (malunga nama-euro angama-40) xa amaxesha amaninzi kungabikho kwa iindleko zeselula ezifanayo ... Kodwa ke! Njengoko inkampani nganye ineselfowuni yabucala (okanye ekhethekileyo okanye eyahlukileyo, nantoni na abafuna ukuyibiza)